I-Inverter Solar Panel System I-Photovoltaic Products China Manufacturer
Inkcazo:Inverter Solar Panels,System Power Generation System,Iimveliso zeSolar Photovoltaic
Inverter Solar Panels,System Power Generation System,Iimveliso zeSolar Photovoltaic
Home > Imveliso > Inkqubo yasekhaya ye-solar / DC > Inkqubo yeGrid Mini > I-Inverter Solar Panel System I-Photovoltaic Products
Imveliso: Can meet customer needs
Ukwenza umgangatho ophezulu wendlela yokusebenza yelanga, ubomi benkonzo bufikelela kwiminyaka eyi-25. UThixo ujikeleza ibhetri ye-colloidal, iphakamisa inkqubo yokuphila kwenkonzo. Inkqubo yokuveliswa kwamandla
Iipaneli zelanga zengeniso .I-algorithm yokulawula i-PWM iyakwamukelwa ukwenzela ukuba isetyenziswe ngokusetyenziswa kwamandla alanga. Ulawulo, inverter, ukudibanisa ukudibanisa.
Iquka izixhobo ezintathu ezisebenzayo: i-inverter yokulawula ilanga wonke ngomnye umatshini, ipakethe yebhetri ejikelezayo kunye nokusebenza okuphezulu kwimodyuli yelanga ye-silicon ye-monocrystalline.
Ukusebenza okuphezulu kunye nobunzulu, imveliso ye-sinusoidal ecocekileyo, ukutshatyalaliswa kwamandla okuguqulelwa kwamanzi, ukuxhatshazwa ngamandla kunye nobunzima obukhulu kakhulu.
Ukusebenza okuphezulu kwe-siocon i-solar energy energy module esetyenziswe kwindlela yokuvelisa amandla inokuyicombulula kakuhle iingxaki zokusebenza kakuhle kwe-power generation yesimodyuli eqhelekileyo kunye neqondo eliphantsi lokuguqula umatshini wonke. Ubomi obude, ukusasazwa kwebhetri ye-colloidal ibhetri kubomi be-battery ejwayelekile-lead acid, ephucula kakhulu inkonzo yobomi benkqubo. Inkqubo kulula ukuyifaka, kulula ukudibanisa, kwaye igcina utyalo-mali lokuqala kunye neendleko kunye nokugcinwa kweendleko.
Imveliso ye-photovoltaic . Ingasetyenziswa kwiintlobo zezixhobo zombane, izixazululo zengingqi kwimveliso yazo kunye neengxaki zombane eziphilayo.
System Power Generation System
Iimveliso zeSolar Photovoltaic
I-Panner Storage Solar Energy Panel
I-Panel Folding Solar Panel